Arakan Eagle: ကုလားတွေရဲ. ရခိုင်မြေပေါ် ခိုးဝင် ရခိုင်တွေကို ရက်စက် ယုတ်မာခဲ့တဲ့ သမိုင်း
ကုလားတွေရဲ. ရခိုင်မြေပေါ် ခိုးဝင် ရခိုင်တွေကို ရက်စက် ယုတ်မာခဲ့တဲ့ သမိုင်း
August 11, 2013 at 10:48pm
(၁၉၄၂)ခုနှစ် ကုလားရခိုင် အဓိကရုဏ်း စတင်ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းတရားကား စစ်တွေမြို့မှ စတင်ဖြစ်ပွားလေသည်။ အင်္ဂလိပ်တပ်ဖြစ်သော ရာခ်ျပုကုလားစစ်သားများက ရခိုင်အမျိုးသမီးများကို အဓမ္မပြုကျင့်ကာ ရ...ခိုင်အမျိုးသားများကို ကုလားအရပ်သားများနှငိ့ ပူးပေါင်း၍ အနိုင်ကျင့် နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ရာမှ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး စတင်ဖြစ်ပွားလာရခြင်းဖြစ်လေသည်။ ယင်းပြသနာသည် မြေပုံမြို့နယ်၊မင်းပြားမြို့နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ကျောက်တော်မြို့နယ်များသို့ ကူးစက်သွားသည်။
ယင်းကိစ္စကို ရခိုင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးပညာသီဟ ၊ ဦးသာကျော်(ဘုံဘောက်)တို့က ပြန်ဖြေပေးသဖြင့် အထက်ပါမြို့များမှာ အေးဆေးငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါသည်။အထက်ပါမြို့နယ်များမှ ထွက်ပြေးကြသော ကုလားများနှင့် ဘူးသီးတောင် မောင်တောမြို့နယ်များမှ ပညာတတ်ကုလားခေါင်းဆောင်အချို့သည် ယင်းဒေသရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ရခိုင်ကျေးရွာများကို ချေမှုန်းသုတ်သင် သတ်ဖြတ်ကြရန် နှိုးဆော်စည်းရုံးကြလေသည်။ ယင်းအချိန်တွင် (မေဂျာ ကျော်ခိုင်)သည် ၄င်းကိစ္စကို ထိမ်းသိမ်းရန် စစ်တွေမြို့မှ ကုလားခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ဦးယာဆိန်း (ရှေ့နေ) ဦးဆူတန်မာမတ်
၊ ဦးဘိုးခိုင် စသောသူများနှင့် ကြိုးပမ်းသော်လည်း မအောင်မြင်သည့်အပြင် (မေဂျာ ဦးကျော်ခိုင် )ကိုယ်တိုင် ဘူးသီးတောင်မြိ့နယ် ဂူတာပြင်ကျေးရွာတွင် ကုလားများ၏ ပစ်ခတ်လိုက်သော သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးသွားရလေသည်။
(၁၉၄၂)ခုနှစ် မေလတွင် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ကုလားကျေးရွာ အားလုံးသည် လူစုရုံးပြီး လက်နက်ကိုင်များကိုင်ဆောင်လျှက် ရခိုင်ကျေးရွာများကို တိုက်ခိုက်ဖျက် ဆီး မီးရှို့ခြင်းများ စတင်ပြုလုပ်လာကြသည်၊ရခိုင်ကျေးရွာများကို ၀ိုင်းထားခြင်း ၊ လမ်းတံတားများအား ဖြတ်တောက်ဖျက်ဆီးထားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကြသည်။ မောင်တောမြို့ကို ဒုတ် ဒါး လက်နက် ကိုယ်စီဖြင့် ၀ိုင်းရံထားသည့် အင်အားမှာ(၂၀၀၀၀)နှစ်သောင်း ကျော် ကျော် လောက်ရှိမည်ဟု ခန်းမှန်းကြသည် ။၊မောင်တောမြို့ ၀င်ပေါက် ထွက်ပေါက် အားလုံးကို ပိတ်ဆို့ထားကြသည်၊ မောင်တောမြို့နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများတွင်လည်း ကုလားများ ၀ိုင်းဝန်းထိုးခုတ်ကြသည်ဟု သတင်းများကြားကြရသည်။ ဒါးဒါဏ်ရာနှင့်မောင်တော မြို့ပေါ်သို့ တက်လာသော သူများမှာလည်း မနည်းလှပါ။မောင်တောမြို့အလယ်ရွာက ဟုထင်ပါသည် အိမ်ထောင်စုတစ်စု မနက်(၄နာရီ)လောက်တွင် ဘူးသီးတောင်သို့ ဖေါက်ထွက်ပြေးကြရာ ကညင်တန်းမှာ ကုလားများ ခုတ်လွှတ်လိုက်သောကြောင့် ပါသွားသော ပစ္စည်းများအားလုံးလည်း လုယူခံရပြီး သွေးသံရဲရဲ ဖြင့် မြို့ထဲသို့ ပြန်ဝင်ပြေးလာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ယင်းနေ့မိုးလင်းသည့်အချိန်မှ စ၍ ရရာပစ္စည်းများကို ထုတ်ပိုးပြီး ထွက်လာခဲ့ကြရာ လမ်းများပေါ်တွင် မိမိကဲ့သို့ အထုတ်အပိုးများဖြင့် ဟိုဟို ဒီဒီပြေးလွားနေကြသော ထိတ်လန့် ကြောက်လန့်နေကြသည့် ရခိုင်အုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက် တွေ့ရပါသည်။ ယင်းအချိန်က အစိုးရက ချိတ်ပိတ် ထားသော ဘုန်းကြီးကျောင်း ကွက်လပ်တွင် လူ(၅၀၀၀)လောက် စုမိလာကြသည်။ မြောက်ဖက်ပိုင်း ကညင်ချောင်းရွာများမှ လူများကို လည်းကောင်း၊ မြို့နှင့်နီးသော တောင်ပိုင်းရွာများဖြစ်သည့် မှော်ဝင်ရွာ ၊မကျီးချောင်းရွာ ၊ ရေဖုန်းပြင်ရွာ၊ ပန်းတောပြင်ရွာ စသော ရခိုင်ရွာများမှ လူများကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ အသက်ဘေးကို ကြောက်ရွံနေကြသော လူအုပ်ကြီးသည် ကလေးငိုသံ လူကြီးဆူညံသံများနှင့် ပွက်ပွက်ညံနေသည်။ထိုနေ့က စက်ရှင်တရားသူကြီး ဦးအောင်သာကျော် ဘူးသီးတောင်ငွေတိုက်မှ ငွေများကို သိမ်းဆည်းရန်နှင့် မောင်တောကို ကုလားများဝိုင်းရံထားကြောင်း သိရ၍ အကူအညီပေးရန် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ဦးအောင်သာကျော်က ဘူးသီးတောင်သို့ ပို့ပေးမည်ဟု ပြောသည်။ ဘူးသီးတောင်သို့သွားရန် စောင့်နေကြစဉ် မိုးသက်လေပြင်းကျပြီး မိုးအကြီးအကျယ် ရွာနေသောကြောင့် ဘူးသီးတောင်လမ်းပိတ်နေကြောင်း ကြားသိရပြန်သည်၊ စစ်သားအစောင့်အရှောက်နှင့် မသွားပါကလည်း သတ်ရန် လမ်းတလျှောက်လုံး ကုလားများ စောင့်နေကြကြောင်း ကြားသိရပြန်သည်။
မနက်(၉)နာရီလောက်တွင် ဦးအောင်သာကျော်ကနတ်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်း တက္ကနက်သို့ ပို့ပေးရန် ကြိုးစားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည်။ နေ့လည်(၁၂)နာရီလောက်တွင် အောင်သာကျော် နှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ် တေလာ နှင့် နီပေါ ဂေါ်ရခါးစစ်သား ရောက်လာပြီး မောင်တောသင်္ဘောဆိပ်သို့ ပို့ပေးပါသည်။ အာရကန် ဖလိုတီလာ ကုမ္မဏီပိုင် သင်္ဘောဖြင့် အခေါက်ခေါက် အခါခါ ပြေးဆွဲသော်လည်း မနိုင်မနင်း ဖြစ်နေလေရာ လှေသန်ဗာန်များနှင့် လည်း ပို့ပေးကြသည်။ မောင်တောမြို့ တစ်ဖက်ကမ်း ယခု ဘင်္ဂလားဒေခ့်ျ နိုင်ငံ တက္ကနက်သို့ ရောက်၍ ညဖက်တွင် မီးတောက်မီးလျှံများတလိမ့်လိမ့် တက်လာသည်ကို တွေ့မြင်ရလေသည်၊ မောင်တောမြို့ကို ကျွန်တော်တို့ မရှိသည့်နောက်ပိုင်း ကုလားများ ထောင်သောင်းချီ ၀င်ရောက် လာကြရာ ရခိုင်အိမ်များတွင် ရှိသော ဆန် ဆီ ဆား ပုဂံ ခွက်ယောက် အိမ်ထောင်ပရိဘောက များပါမကျန် စိတ်တိုင်းကျ ယူငင်ကြပြီး နောက် အိမ်များ ကျောင်းများကို မီးရှို့ကြလေသည်။ ဤအရေးအခင်းတွင် နတ်မြစ်ကမ်းခြေမှ ကျေးရွာများ ဖြစ်ကြသော ငါးခူရ ၊ ခြံပြင် ၊ရွက်ညှိုးတောင်၊ သရက်အုပ်၊ စသော ကျေးရွာများသည် လှေများဖြင့် နတ်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ကြသော်လည်း ကမ်းခြေနှင့် ဝေးသော ရခိုင်ကျေးရွားဘားလုံးသည် ရွာလုံးကျွတ် အသတ်ခံခဲ့ရလေသည်၊ အချို့ရွာများသည် မယူတောင်တန်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဘူးသီးတောင် ကျောက်တော် မြောက်ဦးနယ်များသို့ လက်လွတ်ထွက်ပြေးကြသောသူများသည်။
ဘူးသီးတောင်လက်ဝဲတက်ရွာ မှ ကုလားများ ခုတ်၍လည်းကောင်း ၊ မောင်တောမြို့ တောင်ပိုင်းတွင် အသက်ရှင် လွတ်မြောက်သော ကျေးရွာများမှာ မရှိသလောက်နည်းပါးသည် အားလုံးရွာလုံးကျွတ် ခုတ်သတ်ခံခဲ့ရသည်၊ အလယ်သံကျော် ရဲစခန်းကို လက်နက်သိမ်းပိုက်ပြီး ရဲသားအားလုံးနှင့် ကျေးရွာသားများအားလုံး ကို သတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ကြသည်။ တပ်ထုံးပြင် ကျေးရွာအတွင်း ရှိသမျှကလေး၊ လူကြီးများသည် ရွာကို ကုလားများ ၀ိုင်းရံထားသောအခါ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ပြေးဝင်ခိုလှုံကြလေသည်။ထိုအခါ ကုလားများသည် ရွာသားများနှုင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပါ မီးရှို့လိုက်သဖြင့် ကလေး၊ လူကြီး၊ မိန်းမ၊ ဘုန်းကြီး၊ ကိုရင်၊ ဖိုးသူတော် အားလုံး (၅၀၀)ကျော် အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရလေသည်။
တဖန် (၁၉၄၂)ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဗိုလ်ရန်အောင် ခေါင်းဆောင်သော ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဘူးသီးတောင်မြို့ကို သိမ်းပိုက်သောအခါ ဘူးသီးတောင် မောင်တော မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဖြစ်ပွါးလျှက်ရှိသော ကုလား ရခိုင် အဓိကရုဏ်းနှင့် တပ်ပြေးကုလားများ၏ ဆူပူသောင်းကျန်ူးမှုကို ငြိမ်းချမ်းအောင် ဆောင်ရွက်ရန် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ကျ ဘဂီလီကုလားများ နှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ရပါသသည်၊ ၄င်းတို့၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်အရ ဗိုလ်ရန်အောင် ဗိုလ်မျိုးညွန့်တို့ ခေါင်းဆောင်သော တပ်စိတ်တစိပ် ကို စေလွတ်၍ ချစ်ကြည်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် စေ့စပ်ကမ်းလှမ်းရန် ကုလားခေါင်းဆောင်များနှင့် စေလွတ်လိုက်လေသည်၊ ယင်းနေ့တွင် ကညင်တန်းကျေးရွာ အူရဒူကျောင်း (ယခု အထကကျောင်းဝင်း ပလီနေရာတွင် ကုလားခေါင်း ဆောင်းများက ချစ်ကြည်ရေး ထမင်းပွဲ တစ်ပွဲ တည်ခင်းလိုသည်ဆိုသဖြင့် ပါလာသော လက်နက်များကို တစ်နေရာတွင် စုပုံထား လေသည်၊ ထမင်းစားနေစဉ်ပင် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသော သူများက ဗိုလ်ရန်အောင်တို့အဖွဲ့ကို ၀ိုင်းဝန်းခုတ်ကြသဖြင့် အုပ်ချုပ်သူ တပ်မတော်အရာရှိ နှစ်ဦးနှင့် နောက်ပါအားလုံး သေဆုံးကြရလေသည်၊(၁၉၄၂)ခုနှစ် ကုလား ရခိုင် အရေးအခင်းတွင် (မောင်တောမြို့ မြောက်ပိုင်းတွင် လုံးဝပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း မပြုနိုင်ဘဲ ပြိုပျက် ဆုံးရှုံးသွားသော ကျေးရွာများစာရင်း နှင့် အိမ်ခြေစာရင်းမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
* (၁) သစ်ပုတ်ချောင်းရွာ ( အိမ်ခြေ ၂၀ )* (၂)ကံပြင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၃ )* (၃)ရေဖုန်းပြင်ရွာ(အိမ်ခြေ ၅၀ )* (၄) ပန်းတောပြင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀ )* (၅) မောင်ဦးရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )* (၆) ခွဆုံပြင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၅ )* (ရ) ပြင်ဖြူရွာ (အိမ်ခြေ ၄၅ )* (၈)ဒိုးတန်းရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀၀ )* (၉) သက်ကေပြင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀)* (၁၀)၀က်ပိုက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၆၀)* (၁၁) ကျောက်ချောင်းရွာ( အိမ်ခြေ ၂၅)* (၁၂) ပုဏ်ဏားဆပ် ရွာ(အိမ်ခြေ ၆၀)* (၁၃) သဲချောင်းရွာသစ်* (၁၄) ငန်းချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀)* (၁၅)ဒါကြီးစားရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀)* (၁၆)ကျောက်ပြင်ဆိပ်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )* (၁၇)ပြင်ဖြူချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀ )* (၁၈) ရေခပ်ချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀)* (၁၉)ငါးစားကြူးရွာ (အိမ်ခြေ ၆၀ )* (၂၀) ပြောင်ပစ်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀)* (၂၁)ပြင်ရှည်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )* (၂၂) ဖရုံချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )* (၂၃) ဆင်သေပြင်အထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )* (၂၄) ဆင်သေပြင် အောက်ရွာ (အိမ်ခြေ၂၀)* (၂၅) သဲဖြူချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )* (၂၆) ပြားသားမဲရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅ )* (၂၇) တောင်ဖက်ရွာ (အိမ်ခြေ စာရင်းမရ* (၂၈) ဖေါက်ကျီတောင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )* (၂၉) အထက်ဘော်တူလာရွာ (အိမ်ခြေ ၄၂ )* (၃၀)အင်တူလာရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀)* (၃၁) အင်းချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )* (၃၂) အင်္ဂါဖ ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀)* (၃၃) ကာလာရွာ (အိမ်ခြေ ၈၀)* (၃၄)လဘော်ဝရွာ (အိမ်ခြေ ၃၆ )* (၃၅) ဒုံးကျော်ဖရွာ (အိမ်ခြေ ၂၂ )* (၃၆) သက်ကေပြင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၇၅ )* (၃၇) ဂျိတ်ချိုင် (အိမ်ခြေ ၄၀)* (၃၈)ကိုင်စူးရွာ (အိမ်ခြေ ၂၄ )* (၃၉) တပ်ချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)* (၄၀) အလယ်ချောင်း (အိမ်ခြေ ၈၂)* (၄၁) မောင်ရွေဇံရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀)* (၄၂) သာဒိုးလှရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀)* (၄၃) တပ်ချောင်းချေရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)* (၄၄) ဆင်ပြကွင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )* (၄၅) ရွှေဒိုင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၄၆ )* (၄၆)ရေချမ်းချောင်း (အိမ်ခြေ ၄၀)* (၄၇) ငါးချမ်းရွာ (အိမ်ခြေ ၂၃ )* (၄၈) ရဲအောင်စံရဖွေရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )* (၄၉)ကြောင်နဖေ အထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)* (၅၀)ကြောင်နဖေ အောက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၂၅ )* (၅၁) ချက်စူရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀ )* (၅၂) အရိုးကျရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )* (၅၃) ကျော်ထွီးချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)* (၅၄) အင်းချောင်းအထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၈)* (၅၅)အင်းချောင်းအောက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၂၆ )* (၅၆) ရွှေဖီဦးဖရွာ (အိမ်ခြေ ၂၅ )* (၅၇)ထောက်ကလန်ရွာ (အိမ်ခြေ ၈၈ )* (၅၈)တောင်ပြိုလက်ဝဲရွာ (အိမ်ခြေ ၁၆ )* (၅၉) တောင်ပြိုလက်ယာရွာ (အိမ်ခြေ ၂၈ )* (၆၀)ဒေးတန်းညာ (ရခိုင်ရွာ) (အိမ်ခြေ ၂၂)* (၆၁) ကွမ်းသီးပင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၁၂ )* (၆၂) ကျမ်းထောင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅ )* (၆၃) တန်းချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၁၈ )* (၆၄) စံထွန်းဦးရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀ )* (၆၅) အရှေ့ ခမောင်းဆိပ်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၅ )* (၆၆) အနောက်ခမောင်းဆိပ်ရွာ (အိမ်ခြေ ၂၅ )* (၆၇) သူလူတောင် အထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀ )* (၆၈) သံခုံရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )* (၆၉) မဖြူမရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀)* (၇၀) ကုံးတက်ရွာ (အိမ်ခြေ စာရင်းမရ )* (၇၁) ခင်ပြိုသားရွာ (အိမ်ခြေ ၆၀)* (၇၂)ရွှေငင်ချောင်းအထက်ရွာ(အိမ်ခြေ ၄၀ )* (၇၃) ငရန့်ချောင်းရွာ ၅၀ )* (၇၄)သစ်တုံးနားရွာ (အိမ်ခြေ ၆၀)* (၇၅) ပန်းရွှေအောင်ဖရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀ )* (၇၆) ရွှေလှခိုင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀)* (၇၇) တမန်းသားရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)* (၇၈)ချဒိုးရီရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅ )* (၇၉) သာအောင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀ )* (၈၀)လောင်းပတ်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၀)* (၈၁) ၀က်ကျိန်းရွာ (အိမ်ခြေ ၁၀၀ )* (၈၂)ကြက်ကျိန်းရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )* (၈၃) ကျွဲသဘောက် အထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၅ )* (၈၄) ကျွဲသဘောက် အောက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၆၀ )* (၈၅) ကျောက်တန်းရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀ )* (၈၆)စိမ့်တောပြင်ရွာ (အိမ်ခြေ ၄၀ )* (၈၇) ဂေါ်ဒူရ အထက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၂၅ )* (၈၈) ဂေါ်ဒူရ အောက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၆၅ )* (၈၉) ကျွန်းပေါက်ရွာ (အိမ်ခြေ ၃၅ )* (၉၀) တရိမ်းရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅၀ )* (၉၁)တင်သာရရွာ (အိမ်ခြေ ၂၅ )* (၉၂)သဲချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၆၅ )* (၉၃) ငှက်ပျော့ချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၄၅ )* (၉၄)ငါးစံဘော်ရွာ (အိမ်ခြေ ၈၀ )* (၉၅) လက်ဖွဲကျရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀)* (၉၆) ကျောက်ချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၅၀ )* (၉၇)ရဲအောင်ချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၇၀)* (၉၈) ရေနောက်ငါးသားရွာ (အိမ်ခြေ ၂၀ )* (၉၉) မီးကျောင်းချောင်းရွာ (အိမ်ခြေ ၁၅ )
ရွာပေါင်း ကိုးဆယ့်ကိုးရွာ ရှိ ရခိုင်ရွာများမှာ ကုလားယုတ်တို့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံကြရလေသည် ၊ ထိုထိုသော ရွာများမှ သက်ရှိဆို လျှင် ခွေးတစ်ကောင်တောင် အပြင်ကိုမထွက်ဘဲ သေပွဲဝင်ခဲ့ကြရသည်၊ ထိုအပြင် ရွာလုံးကျွတ် ကုလားသတ်ဖြတ်ခံရ၍ အိမ်ခြေအလိုက် စနစ်တကျ ကောက်ခံရှာဖွေ မရရှိသော ကျေးရွာများမှာလည်း အလွန်များပြားသည်ကို တွေ့ရပါသည် ၊
* (1) ဘော်ဒုလာအောက်ရွာ* (2) ဒိုင်းပိုင်ရွာ* (3) ခိုင်ဦးဖရွာ* (4)သာသြအောင် ရွာသစ်* (5)တပ်ချောင်းချေ တီစားရွာ* (6) မိမင်းသာဖရွာ* (7) ရွှေဒိုင်ရွာ* (8)တောင်ပုတ်ရွာ* (9) လမုံ့ကိုင်းရွာ* (10)ဝေလာဂေါင်းတုံးရွာ* (11) သလူချောင်းရွာ* (12) ရဲဘော်ဦးရွာ* (13)သဲနီရွာ* (14)ကြောင်ခိုးရွာ* (15) ငါးရံချောင်းရွာ* (16)မီးချောင်းခုတ်ရွာ* (17)သစ်တုံးနားရွာ* (18)မှိုင်းစရီရွာ* (19)ဘဲရုပ်ရွာ* (20)ကျောက်ပြင်လှရွာ* (21)မောင်ဆိပ်ရွာ* (22)ဖက်ဝန်းချောင်းရွာ* (23)ဂါရာပြင်ရွာ* (24)၀က်ကျိန်းချေရွာ* (25)စံကားပင်ရင်းရွာ* (26)ငဖြူချောင်းရွာ* (27)နတ်ကျောက်ရွာ* (28)ပြိုင်ချောင်းရွာ* (29)ကြင်ဖေါ်ရွာ* (30)အောင်လှဖြူရွာ* (31)သင်္ဘောလှရွာ* (32)မီးတိုက်ရွာ* (33)နံသာတောင်ရွာ* (33) ကွမ်းတောင်ရွာ* (34)ဂေါ်ဒူရသဲချောင်းရွာ* (35)ဆင်အိုးရွာ* (36) ကျောက်ချောင်းချေရွာ* (38)ဂန့်ဒရံရွာ* (39) ဂြစ်ချောင်းအောက်ရွာ* (40)သစ်သီးပင်အလယ်ပြင်ရွာ* (41)လောင်းဒုံစေတီပြင်ရွာ* (42)ဟန်စားမရွာ* (43) ငါးခူရချောင်းဝရွာ* (44)ကျာခေါင်းထောင်ရွာ* (45)မောင်လုံးဖရွာ* (46)ကြ က်ရိုးပြင်ရွာ* (47)ငန်းချောင်းရွာ* (48)ပွင့်ဖြူချောင်းရွာကြီး* (49)ပွင့်ဖြူချောင်းရွာချေ* (50)ချစ်စံဖရွာ* (51)နေပူခံရွာသစ်* (52)နေပူခံ ရွာဟောင်း* (53)မောင်နှမသဲချောင်းရွာ* (54) ချောင်းမြောက်ရွာ* (55)သလူချောင်းရွာ* (56) ရွာူသစ်ကေရွာ* (57)မင်္ဂလာကြီးကျေးရွာ* (58)ကျောက်လှေကားရွာ* (59)စပ်ချကုန်းရွာ* (60)သဲဖြူကျွန်းရွာ* (61)မင်းကျိုးချောင်းရွာ* (62)ရီဖုန်းပြင်ရွာ* (63)ခွဆုံပြင်ရွာ* (64)သစ်ပုတ်ချောင်းရွာ* (65)ကင်းချောင်းရွာ* (66)အတွင်းကင်းချောင်းရွာ* (67)ကံပြင်ရွာ* (68)ကျိးကန်းဖြူရွာ* (69) မှော်ဝင်ရွာ* (70)ဂြင်းချောင်းရွာ* (71)လင်းဘားကုန်းရွာ* (72)ဇော်မတက်ရွာ* (73) ငါးခူရ တောင်ရွာ* (74)ချီးစားရွာ* (75)အပေါက်ဝရွာ* (76)လာလီရွာ* (77)စိန်ပန်းရွာ* (78)တုံးချောင်းအထက်ရွာ* (79)တုံးချောင်းအောက်ရွာ* (80) ကာဒီရွာ* (81)အုန်ူးပင်ရင်းရွာ* (82)ဒိုးတန်းရွာ* (83)ကညင်တန်းရွာ* (84)အလယ်သံကျော် ရွာဟောင်း* (85)ကြန်ချောင်းရွာ (86)သင်္ဂနက်ရွာ* (87) ကျောင်းတောင်ရွာ* (88)တပ်ထိုးပြင်ရွာ* (89)မြင်းလွတ်ချောင်းရွာ* (90)မြီချောင်းရွာ* (91)ရှောက်ကိုင်းရွာ* (92)ကျောက်ပန်းဒူရွာ* (93)ဗောဓိကိုင်းရွာ* (94)ရွှေမောင်ရွာ* (95)အတွင်းပြင်ရွာ* (96)ကြံတန်းချောင်းရွာ* (97) အင်းဒင်ကြီးရွာ* (98)အင်းဒင်ချေရွာ* (99)သ၀င်ချောင်းရွာ* (100)ကိုးတန်ကောက်ရွာချေ* (101)သျိန်ခါလီရွာ* (102)ဒုံးပိုက်ရွာ* (103)ဆင်ဝပ်ရွာ* (104) အောင်လှဖ ရွာ* (105) ဖေါက်ကျီချောင်းရွာ* (106)ပေါက်တောပြင်ရွာ* (107) ကုန်းတန်းရွာ* (108)ပဒင်းရွာ* (109) ရေတွင်းကျွန်းရွာ* (110)ချရားတန်းရွာ* (111)၀ါးချရွာ* (112)ညောင်ပင်ကြီးအထက်ရွာ* (113)ညောင်ပင်ကြီးအောက်ရွာ* (114) ဒါက်ရွာ* (115) လှပိုးခေါင်ရွာ
အိမ်ခြေစာရင်းအတိအကျမရဘဲ ကုလားများသတ်ဖြတ်ခံရသော ရွာများဖြစ်ကြသည်။
ကုလားကို ယုံကြ ၊သနားကြ ၊ ကုလားဆိုင်က ၀ယ်စားကြ ၊ကုလားရောင်းသော ပစ္စည်းကို ၀ယ်သုံးကြမည်ဆိုလျှင် ထိုထက်ဆိုးသော အဖြစ်သို့ ရောက်ရအုံးမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အထက်ပါ (1942 )အရေးအခင်းတွင် ရခိုင်လူမျိုးများသာ အသတ်ခံရသည်။ နယ်မြေများဆုံးရုံးခဲ့ရသည်။ သိုသော် ဘာသာ သာသနာ၊ ယဉ်ကျေးမှုများ မပျောက်သေးပါ၊ အခုဒီကောင်တွေ ရိုဟင်ဂျာ နာမည်ခံပြီး တိုင်းရင်းသား စာရင်းသွင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလာပြီ။ ဒီကိစ္စကို သက်ဆိုင်သူများ ပေါ့ပေါ့တန်တန် ထားမည်ဆိုပါက အနာဂတ်မြန်မာပြည် အတွက် အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်း ပါကြောင်း...
ရက္ခတမျိုးချစ်အဖွဲ့ - ရန်ကုန်
Posted by Eagle info dash at 15:25
Labels: Article, Bagali, Bangali
~~~~အာချောင်သောမော်စီ နှင့် မူဘာရတ်~~~~
ကုလားတွေရဲ. ရခိုင်မြေပေါ် ခိုးဝင် ရခိုင်တွေကို ရက်စ...